चीनबाट रेन्बो ट्राउटको ६० हजार अण्डा नेपाल आयात - Rasuwa Nepal
वडा नं १, राम्चे
वडा नं २, कालिकास्थान
वडा नं ३, धारापानी
वडा नं ४, धुसेनी
वडा नं ५, जिबजिबे
लघुबित्त वित्तीय संस्था
रसुवाका महत्वपूर्ण स्थलहरूको भ्रमण गरौं
आस्थाको धरोहर : बासुकी नाग
ऐतिहाँसिक पौवाघर (लहरेपौवा)
किमारजोङ : सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्न पुग्नै पर्ने...
आमाको नामले पुकारिने पार्वतीकुण्ड
धार्मिक गन्तव्य : दुधकुण्ड
गणेश कुण्ड एक परिचय
मनमोहक स्थल चन्दनबारी
रमणीय भ्यु पोइन्ट नउर डाँडा
पर्यटकीय क्षेत्र लार्च्याङटार
ऐतिहाँसिक गुर्फु गुम्बा
रमणीय स्थल : मुडुल्लेभञ्ज्याङ
प्राकृतिक चिकित्सालय 'तातोापानी'
रमणीय प्राकृतिक स्थल बिजुली ढुङ्गा
उत्तरगया धाम, बेत्रावती
ज्यर्सा तेन्जे (प्राकृतिक भ्यु टावर)
लोकिल पर्यटकीय स्थल
प्राकृतिक टावर: जुरेढुङ्गा
गोसाइँकुण्ड ताल (Gosainkunda Lake)
गोल्जुङबेशीको मल्लकालीन दरबार
स्याउबारी पर्यटकीय स्थल
कोतघर धैबुङ (धैबुङकोट)
नौकुण्ड ताल (Naukunda Lakes)
जिबजिबे नीलकण्ठ महादेव
कालिका माईको थान
रसुवा जिल्लाको संक्षिप्त परिचय
प्रदेश : वागमती
स्थानीय ह संख्या (गापा) : ५ (पाँच)
वडा संख्या : २७ (सत्ताईस)
क्षेत्रफल : १५५४ ब.कि.मी
अक्षांस : २८⸰ ०’ देखि २८⸰ १५’ उत्तर
देशान्तर : ८५⸰ १५’ देखि ८५⸰ ५०’ दक्षिण
जम्मा जनसंख्या (जनगणना २०६८) : ४३३००
पुरुष जनसंख्या :
महिला जनसंख्या :
जनघनत्व : २८.०४
घरपरिवारको संख्या : ९७७८
जनसंख्या बृदिदर : -०.३३
लैङ्गिक अनुपात : ९८.४
औषत परिवारक आकार : ४.४३
सबैभन्दा होचो स्थान : बेत्रावती (६१४ मी)
सबैभन्दा अग्लो स्थान : लाङटाङ
चीनबाट रेन्बो ट्राउटको ६० हजार अण्डा नेपाल आयात
चीनबाट रेन्बो ट्राउट माछाको ६० हजार वटा आँखा उम्रिएको अण्डा आयात भएको छ । रसुवागढी नाका हुँदै शुक्रबार आँखा उम्रिएको अण्डा नेपाल भित्रिएको हो ।
रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेमा रहेको रेन्बो ट्राउट मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रको लागि अण्डा ल्याइएको हो । चीनको गान्सु प्रान्तबाट डोनाल्डसन् स्ट्रेनको सुइकी–१ जातको माछाको अण्डा ल्याइएको केन्द्रका प्रमुख महेन्द्र भण्डारीले बताए । यसको भुरा उत्पादन गरेर किसानलाई बिक्री गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
गान्सु फिसरी रिसर्च इन्स्टिच्युट र चाइना नेपाल कोअप्रेसन प्रोजेक्टको अनुदान सहयोगमा अण्डा आयात गरिएको हो । यसअघि पनि केन्द्रमा चीनबाट ३० हजार आँखा उम्रिएको अण्डा आयात गरिएको थियो । उक्त अण्डाबाट उत्पादन भएको भुरा मध्ये १६ हजार भुरा किसानलाई सहुलियत दरमा बिक्री गरिएको थियो । केन्द्रका अनुसार यसको परीक्षण गरिएपछि फेरि ५० हजार आँखा उम्रिएको अण्डा आयात हुने छ ।
सुरुमा हवाइमार्गबाट अण्डा ल्याउने तयारी गरिए तापनि बेइजिङमा केही व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि रोकिएको थियो । त्यसपछि अण्डाको पिसिआर गरिएको थियो । पछि फेरि हवाइमार्गबाट ल्याउन अनुमति नपाएपछि स्थलमार्गबाट नै अण्डा आयात गरिएको केन्द्रका प्रमुख भण्डारीले बताए ।
यो नयाँ जातको माछा हो । चीनले रेन्बो ट्राउटको चारवटा जातबाट क्रस गरेर नयाँ जातको विकास गरेको हो । चीनमा १४ प्रकारका रेन्बो ट्राउट रहेको छ ।
केन्द्रमा अहिले यसवर्ष प्रजनन भएका करिब २ हजार ५ सय जापानिज भुरा, ५ सय जापानिज परिपक्क माउ माछा र ३ सय ५० वटा चिनियाँ परिपक्क माउहरू प्रजनन्का लागि पालिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनदेखि हालसम्म ५० हजार वटा आँखा उम्रिएको अण्डा किसानलाई बिक्री गरिसकेको छ । केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार रसुवा सहित गुल्मी, दार्चुला, दोलखा लगायतका जिल्लामा अण्डा पठाएको हो । केन्द्रले रसुवा सहित १६ जिल्लालाई आँखा बनेको अण्डा, माछा भुरा र खाने माछा बिक्री गर्दै आएको छ ।
केन्द्रको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी रसुवा र नुवाकोटमा खपत हुने गरेको छ । त्यसैगरी लमजुङ, मकवानपुर, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, पर्वत, गुल्मी, खोटाङ, धादिङ, ललितपुर, ताप्लेजुङ, मुगु, सोलुखुम्बु, रुकुम पश्चिममा समेत पठाउने गरेको छ ।
कोरोना र विस्थापित बस्तीमा परेको प्रभाव
रसुवाका पाँचै पालिकाका अवसरहरू
किमारजोङ : सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्न पुग्नै पर्ने ठाउँ
भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि लाङ्बुलाई
गोसाइँकुण्डको एकीकृत विकासका लागि ७ करोड
होटल तथा पर्यटन व्यवसायीको प्रदेश भेला गतलाङमा
कोभिडका कारण रसुवागढी नाकाबाट भित्रने पर्यटकको संख्यामा कमी
Media Partner 1 Media Partner2Media Partner3Media Partner4Media Partner5Media Partner 6
Manager : Prem Prasad Paudel
Kalika Rural Municipality, 05, Rasuwa
Copyright (c) RasuwaNepal.Com 2020. All rights reserved. Site Managed By : Template ::::